पाकिस्तानका दिदि बहिनिले लिंग परिवर्तन गरे पछि – Paluwa Khabar
कार्तिक १२, २०७७ बुधबार 22
‘म इस्लामावादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु। यो कुराको मलाई यति खुसी छ कि म बताउनै सक्दिनँ। मलाई सानैदेखि केटीका लुगा मनपर्थेन। मेरो काम र आनीबानी केटाहरूको जस्तो थियो। मेरा सात बहिनीहरू, दुई भाइ पाएर धेरै खुसी भएका छन्। मेरो भाइ पनि खुसी छ।’
यो भनाइ भारतको गुजरात, सोनबडीको दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्र वलिद आबिदको हो। केटी भएर जन्मेका उनले लिंग परिवर्तन गरेका हुन्। लिंग परिवर्तन गर्नुअघि उनको नाम बुशरा आबिद थियो।
उनकी बहिनी वाफिया आबिदले पनि लिंग परिवर्तन गराएर मुराद बनेका छन्। मुराद अहिले ९ कक्षाका छात्र हुन्।यी दुवै जना पन्जाबको एक जमिनदार परिवारका हुन्।
डाक्टरका लागि फरक केस
बिबिसीसँगको कुराकानीमा डा. चौधरीले आफूले यसअघि लिंग परिवर्तन शल्यक्रिया गरेको भए पनि आफ्ना लागि यो केस फरक रहेको बताएका छन्। वलिद र मुरादको दुई वर्षदेखि लिंग परिवर्तनको उपचार चलिरहेको थियो। डा. चौधरीका अनुसार उनले कहिल्यै पनि साख्य दिदीबहिनीको शल्यक्रिया गरेर दाजुभाइ बनाएका थिएनन्।
‘हामीले उनीहरूको भिन्दाभिन्दै शल्यक्रिया गर्‍यौं। वलिद आबिदको शल्यक्रिया २० सेप्टेम्बरमा भएको हो। त्यसपछि उनलाई अस्पतालको आसियुमा राखियो। जब शल्यक्रिया पूर्ण रूपमा सफल भएको निश्चित भयो, हामीले १० अक्टोबरमा मुरादको शल्यक्रिया गर्‍यौं,’ डा. चौधरीले भनेका छन्।उनका अनुसार कयौं चिकित्सक सहभागी भएको यो शल्यक्रिया ६ घण्टासम्म चलेको थियो। शल्यक्रिया सफल भएपछि दुवैलाई २१ अक्टोबरमा घर जाने अनुमति दिइएको थियो।
Prevनेकपामा चुलिदाे बिवाद केन्द्रिय कमिटि बैठक समेत अनिश्चित
Nextजुवाखालबाट वडा अध्यक्ष पक्राउ
‘भगवान् थोरै त द’या गर’ सिद्धार्थ शुक्लाको नि’धनपछि कस्तो छ शेहनाजको अवस्था ?
६ बर्षीया बालिकाको हत्याको विरोधमा बर्दिवास तनावग्रस्त, प्रहरीको गोली लागि ३ घाइते
काेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या बढदाे, कहा कति हेर्नुहाेस